PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Umasipala nombango wezikhundla
Umasipala nombango wezikhundla
Kunamakhansela abefuna kubuyiswe isikhulu ebesiphethe phambilini
Ilanga - 2018-11-22 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE SHINGA
KUSOLWA isandla semfene ngokuhlehla kwenhlolokhono yokuqoka imenenja kaMasipala iMooiMpofana, okuvela ukuthi ihlehliswe wukuthi izikhulu zifuna lesi sikhundla siqhoqhobalwe ngomunye, ekubeni amakhansela efuna kubuyele obesiphethe, uMnu Maxwell Moyo.
Le nhlolokhono obekufanele ibe izolo ngoLwesithathu, kufakwe isazizo kumasipala esithi ngeke isabakhona ngoLwesithathu, luyobuye lumenyezelwe usuku lwayo. Ngawo uMsombuluko ebusuku, kudutshulwe i- transformer kagesi ephakela umphakathi ongaphansi kwalo masipala - lokhu kwenze ukuba umphakathi ungabi nawo ugesi. Kuthiwa vele kunombango omkhulu ngalesi sikhundla okumanje kasiphethwe muntu njengoba lo masipala ungaphansi komlawuli.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana KwaZulu-Natal, ufake uMnu Martin Sithole njengomlawuli kulo masipala ngoNhlolanja (February), ekuqaleni kwalo nyaka.
Kuthe kungakapheli isikhathi eside, uMnu Moyo waphelelwa yinkontileka. Kuthiwa umbango usuke ekutheni sekunamakhansela afuna kubuye yena uMnu Moyo, kanti kunabakhala ngokuthi ziningi izinto ezingaqondakali ezenzeke ngaphansi kobuholi bakhe. Ngokuthola kwaleli phephandaba, ngemuva kwesonto kukhishwe umbiko oveza ukuthi izikhulu ezithile ziyabandakanyeka enkohlakalweni yokuxhashazwa kwemali kulo masipala, isimo sibonakale siba sibi kakhulu kunakuqala.
UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa DubeNcube, wethule umbiko oveza ukuthi kulo masipala imali idliwa bume.
Imibiko yalolu phenyo olunzulu, obelwenziwa kuwona lo masipala, luveza ukuthi izikhulu ezisophikweni olukhipha amathenda, i- sup- ply chain nezinye izikhulu ezingasekho kuwona lo masipala, ziyathinteka ekungaziphathini ngendlela uma kutha-thwa izinqumo zokusebenza kwemali kamasipala.
Phakathi kwamahlazo avezwe yilo mbiko, kuvela ukuthi kunethenda yokuqashwa kwezimoto zalo masipala ebiza u-R29.9 million enikezelwe ngendlela engalungile. Kuvela ukuthi kunomunye umuntu obefake isicelo semali engango-R14.9 million ngale thenda, kodwa wanganikwa yona.
Kuwona lo mbiko, kuvela ukuxhashazwa nokusetshenziswa kwe-akhawunti kamasipala ngendlela engalungile yizikhulu eziphezulu.
Ngokuthola kweLANGA ngemithombo yalo engaphakathi, amakhansela alo masipala nezikhulu zakhona, bashayana ngamakhanda njengoba uNkk Dube-Ncube ekubeke kwacaca bha embikweni wakhe ukuthi unika lo masipala izinsuku eziwu21 kuphela ukuba uthathele labo abathintekayo izinyathelo.
Imithombo yeLANGA iveza ukuthi kungezinsuku ezingaki nje, esinye sezikhulu eziphezulu kuwona lo masipala, sivele safaka incwadi yokwesula isigubhukane, okuthiwa kuyinto esolisayo.
“Njengamanje kulindeleke ukuba umkhandlu uhlale phansi, uthathe izinqumo ukuthi labo abathintekayo kulo mbiko bazobekwa maphi amacala. Kuyasolisa-ke ukushiya kwalesi sikhulu isigubhukane esingaka,” kusho lo mthombo.
Ekhuluma ngodaba lwalo masipala, uNkk Nomusa Dube-Ncube, uthe lo mbiko uqukethe izinsolo ezinzima kakhulu ezikhombisa ukuthi kunezikhulu zikamasipala ezinikezwe umsebenzi wokuyisa intuthuko kubantu, kodwa zona kazikwenzi lokho.
"Lezi zinsolo zinzima kakhulu ngakho-ke silindele ukuba umkhandlu uthathele labo ababandakanyekayo izinyathelo ngokukhulu ukushesha,” kusho yena.
Uthi phakathi kwezinyathelo abalindele ukuba zithathwe, wukubekwa amacala kwabathile, wukubuyiswa kwemali edliwe nokujeziswa kwangaphakathi.
“Kuyaphoxa kakhulu ukubona izisebenzi zikamasipala ezingena kula mahhovisi ngenhloso yokuzicebisa, zingasebenzeli umphakathi,” kusho uNkk Dube-Ncube.
Iziphendulela ngala mahlebezi aqubuke ngemuva kokukhishwa kwalo mbiko, imeya kulo masipala, uMnu Xolani Duma, ithe lo mbiko bawamukele ngezandla ezimhlophe futhi nezincomo zikangqongqoshe bayazemukela.
“Sizimisele ngokuba abathintekayo sibathathele izinyathelo. Kubalulekile ukuba nalabo abasenezandla ezimsulwa babone ukuthi uma belingeka, benza okungalungile, bazobanjwa,” kusho yena.
Uthe unethemba lokuthi lo mbiko uzolekelela ekubeni bakhuculule inkohlakalo kulo masipala. Odabeni lokwesula kwesinye zezikhulu, uMnu Duma uvumile ukuthi lesi sikhulu sisule isigubhukane.
ISITHOMBE NGU: SABELO MASUKU
UMANAPHANAPHA uMasipala waseMooi-Mpofana.